သံစဉ်မဲ့ အလင်္ကာများ: ငါးပုပ်ခြောက်
ကိုစေးထူးရဲ့ နိုင်ရာဂရာ ရေတံခွန်ပုံတွေကြည့်ပြီး ကျွန်မရောက်ခါစက အဖြစ်လေး တစ်ခုကိုသွားသတိရမိတယ်။
ကျွန်မတို့အတွက်တော့ ရယ်စရာပေါ့နော်.. ဒါပေမယ့် ကျွန်မက ရယ်စရာ သိပ်မရေးတတ်တော့ မရယ်ရလဲ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဂလိထိုးပြီးသာ ရယ်ကြပါလို့။
ကြိုတင်ခွင့်ပြုထားလိုက်တယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဂလိထိုးခွင့်။
ကျွန်မတို့ မေမေရယ်၊ အကြီးတွေ၊ ဦးကြီးတွေ နွေရာသီတစ်ခုမှာ နိုင်ရာဂရာရေတံခွန်ဘက်ကို ခရီးထွက်သွားတယ်။ ကျွန်မတို့ ညီအစ်မတွေက ကျန်ခဲ့ကြတယ်။ ခရီးထွက်သွားတော့ ဦးကြီး၊ ကြီးကြီးတို့ အိမ်ကို ကြည့်ပေးရတာပေါ့။ အိမ်ထဲ၊ အိမ်ပြင်က ပန်းပင်လေးတွေ တစ်ရက်ခြား ရေသွားလောင်းပေး၊ ငါးလေးတွေ အစာကြွေးပေး စသဖြင့်။
ကျွန်မတို့ ဦးကြီးက သိပ်ပြီး အချက်အပြုတ်ဝါသနာပါတယ်။ ဒီမြို့မှာ စားစရာက အကုန်ရတယ်။ ဒါပေမယ့် သူက အရာရာကို သူကိုယ်တိုင် အစက အဆုံး ချက်ချင်တယ်။ အဆင်သင့် အထုပ်တွေလဲ ဘယ်တော့မှ မသုံးဘူး။ သူတို့ ခရီးထွက်တဲ့တစ်ညက သူက ရေတံခွန်နားက မြို့က ဦးလေးအိမ်ကနေ ဖုန်းဆက်လာတယ်။ သူ ငါးပုပ်ခြောက်လုပ်ခဲ့တယ်တဲ့။ ပြောဖို့မေ့ခဲ့လို့တဲ့။ သေသေချာချာကြည့်လိုက်တဲ့။ အပေါ်ထပ် မီးဖိုချောင် ၀ရံတာမှာ ထုတ်ထားခဲ့တယ်တဲ့။ အရည်ကို နှစ်ရက်တစ်ခါဆိုလား စစ်ပြီးတဲ့ ကျောက်ခဲနဲ့ ဖိတဲ့။ (သူ့ငါးပုပ်ခြောက်တွက် ငါးတစ်ကောင်ကို ဒေါ်လာ သုံးဆယ်ကျော်ပေးဝယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ နောက် သူငါးပုပ်ခြောက် လုပ်နိုင်ခြင်းကို အကြီးအကျယ် ဂုဏ်ယူသူလဲဖြစ်ပါတယ်။)
“ခြံထဲက ကျောက်ခဲ ၂တုံးမပြီး.. ဖိ”
အဲဒီချိန်မှာ နောက်ဖုန်းတစ်လုံးကနေ နားထောင်နေတဲ့ အဒေါ်အသံကပေါ်လာတယ်။
“ကိုကို.. ကျွန်မ ရဲ့ ပန်းခြံထဲက ကျောက်ခဲတွေတော့ မလုပ်ပါနဲ့ ကိုကိုရယ်”
(သူတို့ အဲဒီတုန်းက အသက်ခြောက်ဆယ်ကျော်နေသော်လဲ ကိုကို ခေါ်ဆဲပါ)
“နေစမ်းပါ..မာရယ်… ကိုကို ကြည့်စီစဉ်ပါမယ်”
“အို… စိတ်ပျက်ပါတယ်” ဆိုပြီး အကြီးက ငိုသံနဲ့ ဖုန်းချသွားတယ်။
“ခြံထဲက သူ့ကျောက်ခဲတွေသာ ယူဖိ.. ဟုတ်ပြီလား”
ဦးကြီး ဖုန်းကိုချသွားတယ်။ အဲဒီညက အကြီးအိမ်ကို ငါးပုပ်ခြောက်ကိစ္စနဲ့ ညီအစ်မတွေ ထွက်ခဲ့ကြတယ်။ ၀ရံတာရောက်တော့ တွေ့ပါပြီ။ သေသေချာချာ ပတ်ထားတဲ့ ဆယ်လ်မွန်နှစ်ကောင်။ နည်းတဲ့ ငါးကြီးတွေမဟုတ်ဘူး။ အခြောက်ခံထားတော့ အနံ့က နဲနဲထွက်နေတယ်။ လက်အိပ်တွေစွတ်ပြီး လင်ဗန်းတွေမပြီး အရည်ကိုစစ်ချရတယ်။ စိတ်ညစ်လိုက်တာလဲ မပြောပါနဲ့တော့။ နောက်တော့ ခြံထဲကို ကျောက်ခဲရှာဖို့ ဆင်းခဲ့ကြတယ်။ ခြံထဲမှာ တွေ့ပါတယ် အလှကျောက်တုံးတွေက ယောင်္ကျားကြီး ငါးယောက်လောက် မ မှရမှာ။ ညီအစ်မတွေ ခေါင်းကုပ်နေတာပေါ့။ ဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့ ဟိုဘက်ခြံက ချက်ကိုစလိုဗက် အန်တီကြီးရဲ့ ကျောက်တုံး ခပ်သေးသေး နှစ်တုံးကို (အသိမပေးပဲ) မနိုင်မနင်းနဲ့ မ လာခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီ ညက နဲနဲမှောင်နေလို့ တော်ပါသေးတယ်။
အပေါ်ရောက်တော့ ငါးတွေကို သေသေချာချာ ပြန်ပတ်ပြီး လင်ဗန်းထဲထည့်၊ ကျောက်ခဲနဲ့ ဖိခဲ့တယ်။
၂ရက်မြောက်နေ့မှာ ပြန်သွားကြပါတယ်။ အရည်ထပ်စစ်ဖို့။ ၀ရံတာလဲရောက်ရော ညီအစ်မတွေ မျက်လုံးပြူးပြီး ပါးစပ်အဟောင်းသားနဲ့ အော့အန်ချင်စိတ်၊ အော်ငိုချင်စိတ်ပေါက်ကုန်ကြပါတယ်။
ဟိုနေ့ ပြန်ထုပ်တာ မလုံလို့ ဟ နေလို့ရယ်။ ရာသီကလဲ ပူလွန်းလို့ရယ်။ ငါးပုပ်ခြောက်က အကောင်တွေ တက်နေပါတယ်။ အကုန် လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်ကုန်တာပေါ့။ (အဲဒီအကောင်တွေနဲ့ အပြိုင်လေ)။ ညကလဲ ဟိုမှာ ၁၁နာရီ၊ မတတ်နိုင်ဘူးဆိုပြီး ဦးကြီးတည်းတဲ့ ဦးလေးအိမ်ကို ညကြီးဖုန်းဆက်ရတော့တယ်။
“မရှိဘူးလေ.. ခရီးဆက်သွားပြီ။ ညကြီး ဘာအရေးကြီးနေတာလဲ။ နောက်နေ့စောင့်လို့မရဘူးလား”
“မရဘူး ဦးလေး။ သူတို့ဘယ်ထွက်သွားလဲ”
“ဘာလဲ.. ပြောလေ.. ဘာဖြစ်နေကြတာလဲ”
အဲဒီအချိန်မှာ နောက်က မမ တွေကလဲ တတွတ်တွတ် တစ်ယောက်တစ်ပေါက် ပြောနေတယ်။ သူ့ငါးတွေ သေသေချာချာကြည့်ခိုင်းတာ ပြန်လာရင် ကောတော့မယ်ဆိုပြီး။
“ဘာလဲ …ငါး” ဦလေးက တော်တော်လေး စိတ်မရှည်တော့။
“အေးပါဟာ.. ဘာဖြစ်လဲ ငါးပုပ်ခြောက်။ ဘတ်ဖလိုက မှာမလို့လား”
“ဒါဆို…ဘာလဲဟ.. နင်တို့ကလဲ၊ ငါအိပ်ချင်နေပြီ”
“ဟို.. ငါးပုပ်ခြောက်တွေ.. ဦးကြီး ငပုပ်ခြောက်တွေ။ အနော်တို့ မလုပ်တတ်လို့.. ဟို..
…….. လောက်တက်ကုန်ပြီ.. !!!!!!!!
အဲ.. အဲဒါ ဘာဆက်လုပ်ရမလဲလို့ မေးမလို့ပါ”
“အာ……….. ဒီကလေးတွေဟာလေ…လောက်တက်မှတော့ ဘာဆက်လုပ်ချင်ကြလဲ… စားလိုက်ကြတော့ဟေ့”
ဦးလေးလဲ စိတ်တိုတိုနဲ့ ဖုန်းကို ကွပ်ကနဲ ချသွားပါတော့တယ်။
ကျွန်မတို့ ညီအစ်မတွေ ငါးပုပ်ခြောက်တွေနဲ့ ဘယ်လိုများ လုံးပမ်းခဲ့ကြရတယ်ဆိုတာကိုတော့ ကိုယ့်ဘာသာကိုသာ ဆက်လက်ပြီး တွေးကြည့်ကြပါတော့ရှင်။
စာရေးသူ--> တပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 10:04 PM
ကဏ္ဍ : ပြုံးစရာ
မလေးရဲ့ ဟိုအကောင်တွေ ညက အိမ်မက်ဆိုးထဲလာကြတယ် ။ အီးးးးးး
ဦးကြီး အိမ်မှာ ငါးပုတ်ချောက်တွေ ကို ဘယ်တော့မှ မစားတော့ဘူး....
အာဇာနည်မိုး နဲ့ အာဘွားဘလော့ဂ်
ဇူလိုင်လထုတ် ဆယ်ကျော်သက် မဂ္ဂဇင်း